Napoli Oo Wakhti U Qabatay Kooxaha Doonaya Kalidou Koulibaly | Somalia News
Napoli Oo Wakhti U Qabatay Kooxaha Doonaya Kalidou Koulibaly
Napoli ayaa waqti adag u qabatay kooxda ’xiisaha u qabta saxiixa Kalidou Koulibaly, taasoo la micno ah in Manchester United iyo Manchester City ay ku qasban yihiin inay dhaqso u dhaqaaqaan si ay u helaan daafaca.
Koulibaly ayaa diirada u saarnaa kooxo dhowr ah sanado badan, kana mid yihiin United iyo City, laakiin Napoli ayaa marwalba diiday dalab kasta oo ay ku doonayeen kooxuhu ciyaaryahanka reer Senegal.
Madaxweynaha kooxda Aurelio De Laurentiis ayaa xaqiijiyay in la iibin karo xagaagan si ay u helaan lacag ay ku xoojiyaan kooxda.
Qiimaha ay Napoli ku iibinayso Koulibaly ayaa la fahamsan yahay inuu ka yar yahay 70 milyan sida ay qortay La Gazzetta dello Sport.
Warar dheeri ah oo ka soo baxaya dalka talyaaniga ayaa sheegaya in kooxda Napoli doonayso in koox kasta oo doonaysa saxiixa xiddiga in ay dhamaystirto dhamaadka todobaadkan hadii kale ay gabi ahaan ka qaadayso suuqa kala iibsiga.
Horyaalka Serie A-da ayaa bilaaban doona Axada kooxda ayaana doonaysa in ay si deg-deg ah u soo afjarto wax walba oo ku saabsan suuqa si ay kooxdu diirada u saarto xilli ciyaareedka cusub.
Previous articleWasiir ka tirsan Maamulka Somaliland & Ilaaladiisa oo laga helay cudurka Coronavirus
Next articleGaari ciidan oo Caruur Iskooley ah dhimasho & dhaawac ugu geystay Muqdisho